Raw ihe price na-amụba na ga-aga n'ihu
Na nso nso a, Fujian osisi Linsen ọkụ, East n'ime Hongye, Morgan Electronics, Hai Le Electronics na ọtụtụ ụlọ ọrụ PCB ndị ọzọ na-ewepụta ọkwa ọkwa PCB, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 10% na-abawanye.
Na mbido ọnwa Julaị, Shandong Jinbao, Kingboard, Mingkang, steeti Weili, Jin Anguo na ọtụtụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ enyela ọla kọpa, CCL na ọnụahịa ndị ọzọ na-abawanye ọkwa, mmụba ọnụego maka kọpa ọla kọpa kwa ton nke 1000-2000 RMB, ụgbọ elu agbago na-abawanye 10RMB / PC, mkpuchi iko ccl welitere 5RMB / pcs, mpempe akwụkwọ welitere 5RMB / PC.
Na ọkwa ọnụahịa, efere, ọrụ, kemịkal na ụgwọ ndị ọzọ abụrụla ihe atọ nke ịrị elu ọnụahịa a. N'ezie, mmụba ọnụahịa bụ ihe dị mkpa na mmekọrịta dị n'etiti nnweta na mgbanwe mgbanwe. Ewu ewu na nke electronic ngwaahịa na upgrading nke ọnụ ahịa ina ụba, na downstream obere pitch Ikanam ahịa ọganihu wee elu, chụpụrụ site multi-oyi akwa PCB osisi ina.
Accessoriesfọdụ ngwa nke Ikanam ngosi, dị ka PCB osisi, cabinets, wdg, na mmepụta usoro ga-eme ka dịtụ nnukwu mmetọ, ọ dịghị izute mba gburugburu ebe obibi chọrọ, nwere imezi na ulo oru upgrading, nke udiozi mma na-eri nke ndị a ngwa.
Ọnụahịa ihe onwunwe bụ ifufe n'ime abalị, dịka mmalite afọ gara aga, ụfọdụ ngwa malitere ibuli ọnụahịa. Ọ bụ ezie na steeti nọ n'akụkụ ọkọnọ nke mgbanwe a, etinye aka iji meziwanye ọkwa nke uru nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Nke a pụtara na ọnụahịa ga-aga n'ihu. Maka ọnụ, nke a bụ akụkọ ọjọọ.
Pricegwọ ahụ nwekwara ike ịnwe onye ọkwọ ụgbọala IC. Dabere na isi mmalite ụlọ ọrụ, Epistar dị ugbu a na-enye esemokwu. Obere pitch na-eto eto, ahịa siri ike abụghị naanị iwetara iwu na uru, enwere mmiri nke nrụgide akụrụngwa.
Insiders na-ebu amụma na ọnọdụ nke ọkọnọ na ọchịchọ ga-aga n'ihu ruo n'afọ ọzọ, nke pụtara na obere oge oge ọnụahịa ma ọ bụ ga-aga n'ihu.